Izinhlawulo Zentengo Yomthengisi We-imeyili
NgoLwesithathu, Agasti 7, 2013 NgoLwesithathu, Agasti 7, 2013 Douglas Karr
Sibe nezikhathi ezithile ezinzima njengoba sibheka umhlinzeki wesevisi we-imeyili omuhle. Abahlinzeki abaningi be-imeyili bamane nje abanamathuluzi wokuhlanganisa esiwadinga ukwenza i-imeyili yethu ithumele (sizoba nezindaba ngalokho maduze)… kodwa inkinga enkulu esibe nayo ngohlelo lwethu lwe-imeyili yikhono lokufanisa ukwenza imali izindleko zohlelo lokusebenza.
Ukufika ngqo ephuzwini, ezinye izakhiwo zamanani entengo ze-SaaS ziyiziphukuphuku ezisobala… ukuhlawulisa ukukhula kwenkampani yakho kunokukuvuza. Engikulindele njengebhizinisi noma umthengi ukuthi lapho ngisebenzisa kakhulu insiza yakho, izinzuzo zezindleko kufanele zihlale ziphansi noma zithuthuke (ngamanye amagama - izindleko ngokusetshenziswa kwazo zihlala zinjalo noma zehla). Lokhu akusebenzi ngentengo enezitezi ozithola - ikakhulukazi ngabathengisi be-imeyili.
Nayi intengo yomphakathi yomthengisi oyedwa (Intengo Yanyanga Nababhalisile):
Uma uthi nhlá, kubonakala kunalokho okungaguquguquki… ababhalisile abaningi bengeza izindleko ezinkulu zenyanga. Inkinga isekuguqukeni, noma kunjalo. Ake sithi ngithumela kwababhalisile abangu-9,901. Lokho kungama- $ 75 ngenyanga. Kepha uma ngengeza ababhalisile abangu-100, ngisenkingeni. Izindleko zami zanyanga zonke ziphindwe kabili ziye ku- $ 150 futhi izindleko zombhalisi ngamunye zenyuka ngama-98%. Ngobhalisile, izindleko zokusebenzisa uhlelo zicishe ziphindwe kabili.
Lokhu kwakukubi kakhulu ngomthengisi wethu wamanje kangangokuba ngayeka ngokoqobo ukuthumela kulo lonke uhlu lwami. Izindleko zethu zisuke ku- $ 1,000 ngenyanga ziye cishe ku- $ 2,500 ngenyanga ngoba benginababhalisile abangu-101,000. Akukona ukuthi ngithanda ukukhokha imali ethe xaxa ngokuthumela okuningi… kusho ukuthi kunesinyathelo esinezinyathelo engingakwazi ukusibuyisa ngemizamo yethu yokumaketha noma uxhaso. Ngobhalisile, izindleko zami bezizophindeka ngaphezu kokuphindwe kabili. Futhi angikwazi ukubuyisa leyo ndleko.
Isoftware njengabahlinzeki Besevisi kufanele ihlolisise ngempela amasistimu wokukhokha ukusetshenziswa njenge-Amazon noma ukusingathwa kwamaphakeji anemikhawulo lapho Ukwehla kwentengo lapho ukhulisa ibhizinisi lakho. Kufanele uklomelise ibhizinisi elikhulayo, ungalijezisi. Uma nginohlu lwama-101,000, elinye iklayenti elinohlu lwe-100,000 akufanele likhokhe imali encane kulowo obhalisile kunami. Lokho kuyisimungulu nje.
Ukukhuthaza ukuhlukaniswa kwe-imeyili nokwenza ngezifiso
Enye inkinga ngalezi zinhlelo ukukhokhela inani loxhumana nabo kusistimu yakho kunokuba uthumele malini empeleni. Uma ngine-database yamakheli we-imeyili ayisigidi, kufanele ngikwazi ukungenisa, ngiyihlukanise futhi ngithumele engxenyeni engaziyo ukuthi izonikeza ukusebenza okuhle kakhulu.
Eziningi zalezi zinhlelo zikhokhisa ngosayizi we-database yakho kunokusebenzisa kwakho uhlelo. Unalokho engqondweni, ungazisola kanjani izinkampani ngomkhankaso we-batch and blast? Uma uzokhokhiswa kubo bonke ababhalisile, futhi ungathumela kubo bonke ababhalisile!
Ngenxa yalokhu kubiza, lezi zinkampani ziphoqa isandla sami. Ngenkathi ngingahle ngithande umthengisi futhi ngiyazise inkonzo yabo, izindleko zebhizinisi zithi ngise ibhizinisi lami kwenye indawo. Ngenkathi ngithanda ukunamathela kumthengisi omuhle, anginayo imbiza yemali engizongena kuyo lapho ngifaka ababhalisile abayi-100 ku-database yami.
Tags: izindleko ze-imeyiliintengo ye-imeyiliizindleko zokuthumela i-imeyiliumhlinzeki wesevisi ye-imeyiliumthengisi we-imeyili